Blackmagic ဒီဇိုင်းသည်သုံးစွဲသူများအားသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အထူးစျေးနှုန်းကိုကြေငြာသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Blackmagic ဒီဇိုင်းဖောက်သည်လီမိတက်အချိန်အထူးစျေးနှုန်းကြေညာ
သာ $4များအတွက်အတူတကွဝယ်ယူသည့်အခါတစ်ဦးကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ဖောက်သည် ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 12K နှင့် HyperDeck စတူဒီယို 2,495G အပေါ်အထူးစျေးနှုန်းရရှိနိုင်သည်။
Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲရဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖောက်သည်အနာဂတ်သက်သေပြမယ့်တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ရရှိရန်အဘို့အအောင်, သာ $4အသစ်တစ်ခု ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 12K နှင့် HyperDeck စတူဒီယို 2,495G အထုပ်သဘောတူညီချက်ကြေညာခဲ့သည် က Ultra HD.
ဒီအထူးကမ်းလှမ်းမှုများဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသူဖောက်သည်များမှာပစ်မှတ်ထားနေသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကို ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုခလုတ်အသက်ရှင်လျက်, သူတို့ကိုအလားတူစျေးနှုန်းပိုမိုအစွမ်းထက်ခလုတ်ရရှိရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဖောက်သည်များပေါင်းစပ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်နှင့်ထုတ်လွှင့်အသံဖမ်းနှစ်ဦးစလုံးကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘို့အဒါဟာအလွန်ဘုံပါပဲ။ အတူတကွဝယ်ယူသောအခါ, ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုခလုတ်နှင့် HyperDeck စတူဒီယိုအသံဖမ်းပုံမှန်အားဖြင့်စုစုပေါင်း $ 1,990 ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ဒီအထူးသဘောတူညီချက်နှင့်အတူဖောက်သည်နေသောပိုပြီးအစွမ်းထက် ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K နှင့် HyperDeck စတူဒီယို 12G ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် က Ultra HD များတွင်အသုံးပြုလျှင်ပင်မော်ဒယ်များနှင့်အပိုဆောင်း features တွေပါ, HD ပိုပြီးသာ $ 500 ဗီဒီယိုကို formats ။
အစွမ်းထက်၏ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီပေါင်းစပ် က Ultra HD တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှုခလုတ်နဲ့ က Ultra HD ထုတ်လွှင့်အသံဖမ်း $ 4,190 ကုန်ကျမည်ဟု, ဤသဘောတူညီချက် $ 1,695 များ၏ဖောက်သည်တစ်ဦးချွေတာရေးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
အဆိုပါ ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K အပါအဝင် ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုထက်ပိုအစွမ်းထက်စေအများအပြား features တွေရှိပြီး က Ultra HD ထောက်ခံမှုမြင့်မားသည် frame rate ကို 1080p HD 1080p60, တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ input အပေါ်တစ်ဦးအပြည့်အဝ frame ကို Re-synchronous တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ aux output ကို, XLR connectors အပေါ်မျှမျှတတ Analog စအသံသွင်းအားစု, HiFi အသံသွင်းအားစုများနှင့်ဟန်ချက်ညီအသံရလဒ်နှင့်အတူ 8 ဗီဒီယိုကိုသွင်းအားစုများ၏စုစုပေါင်းမှထောက်ခံမှုတက်။ ဒါကမော်ဒယ်တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံ AC ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပေါင်းဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် aux ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆက်ကပ်အပ်နှံ control panel ထဲကတစ်ခု LCD ကိုတပ်ဆင်ထားကြောင်းတစ်ကြော့စက်သတ္တုဒီဇိုင်းပါဝင်သည်။
ပိုမိုအစွမ်းထက် HyperDeck စတူဒီယို 12G ဖြစ်ပါသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကိုအစွန်း 12G-SDI ဖြတ်တောက် features နဲ့မြန်နှုန်းမြင့် SSD ကိုရဲ့ ProRes, DNx နှင့် compressed လုပ်မထားတဲ့ဗွီဒီယိုကိုကို formats မှမှတ်တမ်းတင်ပံ့ပိုးသောအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်စတူဒီယိုအသံဖမ်း။ HyperDeck စတူဒီယို 12G စဉ်ဆက်မပြတ်, non-stop မှတ်တမ်းတင်ဘို့ dual-SSD ကို slot နှစ်ခုတပ်ဆင်ထားအပေါင်းတို့နှင့်တည်ဆဲ SD ကနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီး HD ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်မြင့်မားတဲ့ frame rate ကို က Ultra HD 2160G-SDI မှတဆင့် 60p12 ။ အကြောင်း, ဖောက်သည်များမဆို SD ကအလုပ်လုပ်မည်ကိုပေါင်းစပ် switching နှင့်ကျွမ်းကျင်အနာဂတ်အထောက်အထားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု get ကိုဆိုလိုသည် HD or က Ultra HD ထုတ်လုပ်မှု။
ဤအကပိုအစွမ်းထက်မော်ဒယ်နှစ်ဦးစလုံး SD ကအကြားလက်ငင်း switching ကိုထောကျပံ့သောကြောင့်, HD နှင့် က Ultra HD ဗီဒီယိုကိုကို formats ကြောင့်သူတို့က ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုနှင့် HyperDeck စတူဒီယိုမော်ဒယ်များများအတွက်အစားထိုးအတွက်ရေစက်ဖြစ်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤရွေ့ကားကပိုအစွမ်းထက်မော်ဒယ်များတူညီသောဗီဒီယိုကိုစံချိန်စံညွှန်းများအဖြစ်မြင့်မားတဲ့ frame rate ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ် HD 1080p60 ပေါင်းမှတက်နှုန်းထားများ က Ultra HD ဗီဒီယိုကိုကို formats ။
"ကျနော်တို့ဒီအထူးဈေးနှုန်းမှာအတူတူ ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K နှင့် HyperDeck စတူဒီယို 12G ပူဇော်နိုင်ကြသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်," Grant ကအသေးသုံးငွေ, CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်, Blackmagic ဒီဇိုင်း။ အတွက် "ဝယ်လိုအား က Ultra HD ထုတ်လုပ်မှုကြီးထွားလာသည်နှင့်ဖောက်သည်များအထိရွှေ့ဖို့တတ်နိုင်လမ်းကိုတောငျးဆိုပြီ က Ultra HD သူတို့ရဲ့တည်ဆဲနှင့်သဟဇာတင် HD Workflows ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 500 ထက်သာ $ 1080 ပိုပြီးအဘို့ဤကန့်သတ်အချိန်ပေါင်းစပ်, HD ဖြေရှင်းချက်ဖောက်သည်အဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုအဆင့်မြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကရဖို့အတှကျကဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် က Ultra HD လိုက်ဖက်တဲ့! "
အဆိုပါ ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K နှင့် HyperDeck စတူဒီယို 12G အထုပ်သဘောတူညီမှုကနေကန့်သတ်အချိန်များအတွက် $ 2,495 များအတွက်ရရှိနိုင် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K ၏ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများ, HyperDeck စတူဒီယို 12G အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အခြားအ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/press/images
4K ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-29
ယခင်: အဆင့်မြှင့် PrimeTime 1SLED XB2 LED ကို 95 + CRI ဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: ဒေတာကိုဘုရင်ကဖြစ်ပါသည်: မိုးတိမ်အတွက် QoS နှင့် QoE ၏ထ